Showing 61-80 of 162 items.
बीबीसी / गत हप्ता ट्वीटरमा ट्रेन्ड गरिरहेको #अर्गेजमइनइक्वालिटी ह्यासट्यागले ध्यान खिच्यो। कण्डम बनाउने एक कम्पनीले सुरु गरेको &lsquo;अर्गेजम इनइक्वालिटी&rsquo; (चरमसुखमा असमानता) अभियानमा आफ्नो हालैको बयानका कारण भारतीय अभिनेत्री
एजेन्सी / धेरैले भोगेको समस्या हो, पिसाबको संक्रमण। पिसाब गर्दा दुख्ने, पोल्ने हुँदा अत्यन्तै पीडा हुने यो संक्रमण महिला र पुरुष दुवैलाई हुन्छ। यसलाई चिकित्सकको भाषामा युटीआई अर्थात युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भनिन्छ। यौनाङ्ग
एजेन्सी / शारीरिक व्यायाम कुन बेला गर्ने ? बिहानको खाजा खाएर गर्ने वा खाली पेटमा ? वर्षौंदेखि यसबारे बहस चलिरहेको छ। एक खाले मत छ : बिहानको खाजा खाएर एक्सरसाइज गर्नु उचित हुन्छ। व्यायामअघि खानेकुरा खाँदा हाम्रो रगतमा चिनीको मात्�
काठमाण्डौ / सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना वढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा (फोर प्ले) गर्ने गर्नु पर्छ। यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनैपनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प�
भिटामिन 'ए' र जुकाको औषधि खुवाइँदै, किन आवश्यक पर्छ भिटामिन ए ?
काठमाण्डौ / शनिबार र आइतबार देशका सबै पालिकामा राष्ट्रिय भिटामिन &lsquo;ए&rsquo; कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका झण्डै २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन &lsquo;ए&rsquo; क्याप्सुल, एक वर्षदेखि पाँच व�
एजेन्सी / कुनैपनि पुरुषमा यौन क्षमता कति छ भन्ने कुरा महिलाले सुँघेरै थाहा पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार आफ्नो प्रजनन चक्रको चरम सिमामा रहेका महिलाहरुले सेक्स हर्मोनका कारण पुरुषबाट आउने विशेष गन्ध सुँघेर पत्ता �
एजेन्सी / तपाईंलाई थाहै होला&ndash; हस्तमैथुन एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो र यसले स्वस्थ यौन विकास भएको संकेत गर्छ। हस्तमैथुनले वजन कम गर्दैन। यसमा खर्च हुने शक्ति निकै न्यून हुन्छ। हस्तमैथुन गर्दा यस्तै १ सय क्यालोरी प्रतिघण्टा
काठमाण्डौ / यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो। मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ। तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन्। विबाहिताले गर्ने सेक्स र अविवाहिताले �
1048 पटक पढिएको
एजेन्सी / के तपाईंलाई असाध्यै रिस उठ्छ ? अथवा, स&ndash;साना कुरामा चिच्याउने र झगडा गर्नुहुन्छ ? यदि यस्तै गर्नुहुन्छ भने सावधान, किनभने विज्ञानका अनुसार रिसाउँदा तपाईंको तौल बढ्न सक्छ। सुन्दा अचम्म लाग्यो होला, तर यो वास्तविता हो। ब
यस्ता छन् मौसमी रुघाखोकीका लक्षण र बच्ने उपाय
इटहरी / मौसमी रुघाखोकी ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरु बिरामी हुने गर्दछन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ। वर्षा यामको शुरु तथा अन्त्य, जाडो यामको शुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुघाखोक
प्रकाशित मितिः आश्विन 11, 2076
उत्तेजना बढाउने औषधि के-के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ?
काठमाण्डाै / सिनामंगल स्थित सडकमा कम चहलपहल थियो। मध्यान्हको घामका कारण मानिसहरु उतिसारो सडकमा थिएनन्। त्यही नजिकै रहेको एउटा औषधि पसलमा एक युवक पसलेसँग जोडतोडले कुरा गरिरहेका थिए। &lsquo;जे पायो त्यहीं गफ दिने, ८ हजार तिरेको के क�
महिलाहरु सेक्समा चाहन्छन् यस्तो भेराइटी !
एजेन्सी / महिला पुरुषको व्यग्ला बेग्लै चाहना र शैली हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पुरुषहरुले महिलालाई सन्तुष्ट पार्न सकेका हुदैनन् र त्यसको असर निकै तनाव पूर्ण हुन्छ। यौन स्वास्थ र यसको व्यवहार नामक खोजबाट अमेरिकी युनिभर्सिटी इन्डि�
काठमाण्डौ / &ldquo;भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ।&rdquo; खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ। यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भ
4430 पटक पढिएको
धरानस्थित गुम्बामा सिठो ल्हाछोे शान्तिदेव र क्रोधदेवको चित्र कोरिने
सम्वृद्धि र विकासका लागि इटहरी उपमहानगरले लगानी सम्मेलन गर्ने